Ubomi Bomntu: Inkcazo kunye neMbali
Unqulo & Umoya Sibanzi
Inkcazo kunye neMbali
Ixesha eliqhelekileyo lomlingo liquka iindidi ezahlukahlukeneyo zemilingo ezihlanganiswe kuphela kukuba ziyimilingo yabantu abaqhelekileyo, kunokuba imilingo yemilingo eyayisetyenziswe ngabafundi abafundayo.
Umlingo wesintu ngokuqhelekileyo uyinto ebonakalayo, efuna ukujongana nezifo eziqhelekileyo zoluntu: ukuphulukisa abagulayo, ukuzisa uthando okanye inhlanhla, ukuqhubela izinto ezimbi, ukufumana izinto ezilahlekileyo, ukuvelisa izivuno ezilungileyo, ukunikezela ukuzala, ukufunda iziqu kunye nokunye.
Iimveli ziqheleke ngokulula kwaye zihlala ziguquka ngexesha elide njengoko abasebenzi bengakwazi ukufunda nokubhala. Izinto ezisetyenzisiweyo zisetyenziswa ngokuqhelekileyo: izityalo, iimali zemali, izipikili, izinkuni, amaqanda, ama-twine, amatye, izilwanyana, iintsiba, njl.
Folk Magic eYurophu
Kuya kubonakala ngokuqhelekileyo ukubona amabango ngamaKristu aseYurophu eshushisa zonke iintlobo zemilingo, kwaye loo magqirha abanobuqhetseba. Oku akunjalo. Ubugqirha kwakuhlobo oluthile lomlingo, oluyingozi. Amagqirha abantu abazange bazibize ngokuba ngabathakathi, kwaye babexabisekileyo amalungu omphakathi.
Ngaphezu koko, kude kube yiminyaka embalwa edlulileyo, abantu baseYurophu abazange bahluke phakathi kwemilingo, imifuno kunye neyeza. Ukuba ugule, unako ukufumana ezinye izityalo. Unokuyalelwa ukuba uzidle, okanye unokuxelelwa ukuba uzixhomeke emnyango wakho. Ezi zikhombululo zimbini aziyi kubonwa njengendawo ehlukileyo, nangona namhlanje singathi enye yayingumuthi kwaye enye yayingumlingo.
I-Hoodoo yinkqubo yemilingo yekhulu le-19 ifunyenwe ngokuyinhloko phakathi kwabantu base-Afrika nabamerika. Umxube weAfrika, waseMelika kunye naseYurophu. Ngokuqhelekileyo igxile kwimifanekiso yobuKristu. Iingcaphuno ezivela eBhayibhileni ziqhelekileyo zisetyenziswe ekusebenzeni, kwaye iBhayibhile ngokwayo ithathwa njengento enamandla, ekwazi ukugxotha iimpembelelo ezimbi.
Kwakhona iphinda ibhekiswe njengengcambu, kwaye ezinye ziza kubhala ubuqhetseba. Ayinalo uxhulumaniso kwiVodou (Voodoo), nangona amagama afanayo.
I-Pow-Wow yenye enye isebe laseMerika lemibala yabantu. Nangona eli gama linemvelaphi yaseMelika, iindawo ezivela kwimvelaphi yaseYurophu, zifumaneka kwi-Dutch Dutch.
I-Pow-Wow yaziwa nangokuthi i-hex-work and designs eyaziwa ngokuba yiimpawu ze-hex ziyinxalenye eyaziwayo kakhulu. Nangona kunjalo, ezininzi iimpawu ze-hex namhlanje ziyimigqabantso nje kwaye zathengiswa kubakhenkethi ngaphandle kwentsingiselo yemilingo.
I-Pow-Wow ngokuyinhloko luhlobo lokukhusela lomlingo. Iimpawu ze-Hex ziqheleke kakhulu kwiindawo zokugcina ukukhusela okuphakathi ngaphakathi kwiimeko ezininzi zeentlekele kwaye zikhangele iimpawu ezinobuncedo. Nangona kukho iindibano eziqhelekileyo ezifunyenwe ngokubanzi kweziganeko ezahlukeneyo ngaphakathi kweso sandla se-hex, akukho mgaqo oqinileyo wokudalwa kwazo.
Iingcinga zobuKristu ziyinxalenye eqhelekileyo yePow-Wow. UYesu noMariya bavame ukuvakaliswa kwiindawo ezingenayo.
Iyini i-Tenrikyo kunye noJoyous Life?
Ukuvumelanisa - Yintoni yokuvumelanisa?
Ukwahlukana Phakathi kwama-5 aMandla aMandla oMlingo
I-Movement Civil Rights Movement is Back
Iintlobo zoKhetho lweNdalo
Yiyiphi impahla kwi-Economics?